Martin Scorsese filimkiisa soosocda ee Apple TV +, wuxuu balaariyay jilitaankiisa | Waxaan ka socdaa mac
Martin Scorsese filimkiisa soo socda ee Apple TV + ayaa sii ballaadhinaya taageerayaashiisa
Martin Scorsese filimkiisa soo socda, Dilaa dayaxa ubaxa, ayaa wali ka fog bilaabida wax soo saar, filim si gaar ah uga soo muuqan doona Apple TV +, ka dib heshiiskii uu agaasimuhu la gaadhay barnaamijka fiidiyowga ee qulqulaya wax yar ka hor sanad ka hor.
Wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira filimkan waxaa laga heli karaa ugu dambayn. Sida laga soo xigtay warbaahintan, William Belleau, Louis Cancelmi, Jason Isbell iyo Sturgill Simpson waa jilayaasha cusub ee qeyb ka noqon doona jilayaasha filimka oo ay sidoo kale jilayaan Leonardo Dicaprio iyo Robert DeNiro oo na tusaya sheekadii dilalkii Osage ee 1920-maadkii.
Jilayaasha cusub ee ku soo biiray jilayaasha, horay ayuu ugu xilsaaray doorarkiisa filimka:
William Belleau Wuxuu la ciyaari doonaa Henry Roan, dhaqtar Osage ah oo xiriir dhow la leh qoyska DiCaprio ee Burkhart.
Louis Cancelmi waa Kelsie Morrison, hustler maxalli ah oo saaxiib la ah Burkhart.
Jason Isbell, oo markiisii ​​ugu horreysay jilaa ka noqda filimka, wuxuu ciyaaraa Bill Smith, oo cadow ku ah Ernest Burkhart.
Sturgill simpson Wuxuu ku biirayaa sidii horyaalkii caanka ahaa ee rodeo iyo tahriibiye Henry Grammer.
Filimkan cusub ayaa ah ku saleysan buugga Dilaaga Dayaxa Ubaxa: Dilkii Osage iyo Dhalashadii FBI, buug ku saabsan taxane ah dilkii Osage Native Americans oo degay Oklahoma.
Filimkan waxaa la dhigay 1920-yadii wuxuuna daba socdaa helitaankii saliid dhigaal ah oo hoosyimaada dhulalkii aan soo sheegnay ee Dhaladka Mareykanka. Baaritaanka la xiriira kiiskan waxay ahayd horudhaca abuuritaanka FBI.
Dilaaga Dayaxa Ubaxa marka hore waxaa laga sii deyn doonaa tiyaatarada, si loogu tartamo Akadeemiyada Hollywood ee Oscars, iyadoo la gaarayo adeegga fiidiyowga qulqulka dhowr toddobaad kadib.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Martin Scorsese filimkiisa soo socda ee Apple TV + ayaa sii ballaadhinaya taageerayaashiisa
Muuqaalkii ugu horreeyay ee Xeebta Kaneecada hal bil kadib markii la soo saaray
In ka yar kalabar waxyaabaha ku jira Apple Podcast waxay leeyihiin 10 ama in ka badan dhacdooyin